I-Quadrocopter - iSearch
Qala Ezemidlalo Nokuzijabulisa amathoyizi Quadrocopter
Okthoba 30, 2017
Quadrocopter manje yizindiza ezithandwa kakhulu zomsakazo ezilawulwa ngomsakazo. Ekuqaleni kusekhona helicopter elawulwa kude abelwe, manje banesigaba sabo siqu njengoba Multicopter okubangelwa. Multicopter umele owodwa imodeli indiza, okungaphezu kokubili okwenziwe ngezindiza ezibheke phansi. Ngokuningiliziwe, leli gama elivamile lihlanganisa:
I-Tricopter enezi-rotors ezintathu
I-Quadrocopter enezinguquko ezine
I-hexacopter ene-6 rotors
I-Octocopter ene-8 rotors
Izinkinobho zezindiza ezinenani eliphakeme kakhulu le-rotors zisekelwe manje ukuze zakhiwe ngokwabo noma zithuthuke esikhathini esizayo, bese zihlanganisa lolu hlu ngokufanele.
Quadrocopter Kukhona imiklamo ehlukene kakhulu nezindawo zamanani, ngakho-ke abaqalayo nabachwepheshe bangathola imodeli efanelekayo emakethe. Ngenkathi iningi Quadrocopter zenzelwe indiza yangaphandle, zikhona nezincane onobuhle Indoor, okungaqhutshwa ngaphandle ngaphandle kwesimo sezulu esinokuthula.
1 Iyini i-quadrocopter?
2 I-quadrocopter elawulwa kude ikusebenza kanjani?
4 Uhlelo lwe-GPS
5 Umsakazo wokulawula okude
6 Iyunithi yokwamukela
7 Isilawuli sejubane
8 Amamori kagesi
10 Izinhlobo ezahlukene ze-quadrocopters
10.1 I-quadrocopter (i-quadrocopter encane) yokusetshenziswa kwangaphakathi
10.2 I-quadrocopter yokusetshenziswa kwangaphandle
13 Amamodeli wezinga lokungena
15 Nquma ngaphambi kokuthenga uma kudingwa imodeli ehlanzekile yangaphakathi. Ngaphandle, ukuzola okuphelele kuyadingeka ngendiza.
16 Ukuthenga ku-Intanethi noma kumthengisi wendawo?
16.1 Esizeni: amamodeli avela kwezohwebo ochwepheshe
16.2 E-intanethi: Thenga kusuka kumthengisi we-intanethi
17 Izinzuzo ze-quadrocopters ezikhungweni ezilawulwa kude nezindiza zezindiza
Kufana ne-helicopter edingekayo Quadrocopter akukho amaphiko ukuze athole amandla ngokuhamba kwe-air. I-flight eyenziwa ngamapulisi aqondiswa phansi, ngakho-ke ukukhishwa okuqondile nokufika okuqondile kungenzeka. Uma kuqhathaniswa ezinophephela emhlane idinga eyodwa Quadrocopter kodwa kunoma yiziphi izingxenye zemishini, isibonelo ama-rottor blades noma ama-swashplates. Futhi iqeda i-rotor yomsila, e-a indiza kudingekile ukulinganisa ukudluliswa kwe-torque ku-chassis. a Quadrocopter ine-rotors ehlukile ukubuyisela i-torque. Izindiza, isikhundla nokunyakaza kutholakala kuphela ngokushintshashintsha kwejubane lezinjini, okuyinto Quadrocopter ikakhulukazi Abaqalayo batuswa nakuba banezo zonke izici zokulawula i-helicopter.
I-quadrocopter elawulwa kude ikusebenza kanjani?
Ku-chassis kukhona ama-booms amane lapho amabhomu amane kagesi ahlanganiswe ne-rotors awo ebangeni elidingekile kusuka komunye nomunye. Ngokwengxenye (kuye ngokuthi imodeli), i gear phakathi kwama-motor kanye ne-rotors ingaphakanyiswa. Ama-pair of rotors agijima ezinkambeni eziphambene, ezibuyisela i-torque futhi zenze isimo sengqondo esifanele. Ukuhamba kwezindiza kungatholakala ngokushintsha ijubane le-injini. Amanye amamodeli asebenzisa njengaku I-helicopters gyrosukuzinzisa isimo sengqondo esizimele. ngesikhathi quadrocopters isisindo sezindiza sisakazwa ku-rotors ezine. Lokhu kungafaniswa nezinjini ezincane ze-helicopter kanye nama-rotors asetshenzisiwe. Lokhu kuvumela a ukwakhiwa okuqinileokunciphisa umonakalo kumamodeli uma kwenzeka ukuphahlazeka. Vumela futhi Quadrocopter umthamo ophezulu wezindleko, ngakho-ke bavame ukuhlonyiswa ngamakhamera, isibonelo. Izici zezindiza eziphathekayo ze Quadrocopter uye wenza kube mnandi ngezinhloso ezinye ngaphandle kokuzilibazisa okuhambayo. Zisetshenziswa, isibonelo, zokuhamba ngezindiza zokuqapha nokuthutha. Ngaphandle kweyunithi yokushayela idinga Quadrocopter Yebo izingxenye ezijwayelekile zezinhlobonhlobo ezilawulwa kude:
Ukunikezwa kwamandla (ibhetri)
Radio elawulwa kude Lidlulisela
Ngaphambi kokuthenga i-quadrocopter, cabanga ukuthi ufuna kuphi futhi ufuna ukuyivumela. Kubalulekile ukuphawula imithethonqubo ye-quadrocopters (i-drones).
Ngu I-Global Positioning System (GPS) kungaba eyodwa Quadrocopter, isibonelo i I-Revell Control RC GPS Quadcopter, yenza imisebenzi eyengeziwe. Isibonelo, sizohlala endaweni lapho kukhishwa injabulo. Ngaphezu kwalokho, i-GPS ingasetshenziselwa ukuvumela imodeli eyelulekwa kusuka ebangeni lokudlulisela libuye futhi. Amanye amamodeli avumela ukulandelela okuzenzekelayo kwe-transmitter noma amaphuzu okuhambisa okulungiselelwe. Idatha ye-Telemetry njengejubane, ukuphakama, isikhundla, isimo sokukhokhiswa kwamandla kagesi ngokuvamile kuhanjiswa.
Revell Control RC GPS Quadrocopter nge FPV Full HD ikhamera, GHz ezilawula elawulwa kude futhi ukubonisa bukhoma ukusakaza telemetry, kuze 20 indiza imizuzu isikhathi, angilandele, ngibuyele ekhaya, Navigator 23899Anzeige
nge-GPS uhlelo (isikhundla sokubamba kanye nokufika ekhaya) nomsebenzi we-Follow Me
Ikhamera ye-HD egcwele (1.080p) - Ukuqopha ngekhadi le-micro SD-HC ku-64 GB (ikhadi alifakiwe) - Isithombe esibukhoma nge-control control remote
Ama-Brussels nama-speed 2 nge-flip function
Isistimu ye-4 ye-2,4 GHz yesilawuli kude (imodi eguquguqukayo 1 / Imodi 2)
ukuhamba okuqinile ngohlelo lwe-6 Axis gyro, imodi engenamandla, inzwa yokuphakama - kuhlanganise nokukhanyisa kwe-LED kanye ne-rotors rotors
Umsakazo wokulawula okude
Umsakazo wesilawuli kude uhlangana ngokuyinhloko kwelinye Quadrocopter izidingo ezifanayo njengawo wonke amamodeli alawulwa kude. Ngayo yonke imisebenzi ingalawulwa umsakazo. Kunamashaneli wokulawula ahlukene atholakalayo. Kuye ngokusebenza komodeli, i-4 ku-6 iziteshi noma ngaphezulu kuyadingeka. Amagrethri wezintambo zezilawuli ezikude zomsakazo yi-27 MHz, i-35 MHz (evunyelwe kuphela izindiza ze-model) 40 MHz ne-2,4 GHz. Ikakhulukazi ukulawula okukude kwe-2,4 GHz kubonakala ngokuthembeka okuphezulu. Uma ngabe imodeli ifakwe ikhamera ethumela izithombe ngomsakazo ngesikhathi sangempela kumuntu owemukelayo, qiniseka ukuthi izimpawu zomsakazo ze-transmitter kanye nekhamera aziphazamisani. Isibonelo, kukhona amakhamera angenantambo asebenzisa uhla lwe-5,8 GHz lokudlulisa. Kukhona amasethi aphelele lapho ikhamera yomsakazo ne-receiver sekuvele ifakiwe. Ngokuvamile ziba nombukiso omncane kusilawuli esilawuliwe kude, noma okungenani uvumele uxhumano lwesiboniso.
Efanelekile kumthumeli, umamukeli uyadingeka. Isebenza izibonakaliso zokulawula ezitholiwe futhi idlulisela kuzo izingxenye, isibonelo, abalawuli bejubane lamamori. Umamukeli kumele abe nenani elifanele leziteshi zomsebenzi ngamunye futhi alisebenzise phezu kwebanga elifanayo lemvamisa futhi athumele isiteshi somlawuli wesilawuli kude. Kumsakazo omude wesilawuli esikude ukushintsha ushintsho wesiteshi kwenziwa ngokushintsha i-quartz ye-plug-in (ukudlulisa nokwamukela i-quartz).
Ukulawula ijubane labalawuli bejubane lamanjane kagesi kuyadingeka njengamanye amamodeli kagesi Quadrocopter ngokusho kwezingxenye ze-4 izingcezu ezine. Ngokusebenzisa i-joystick ekulawuleni okude, isilawuli sejubane sixhunywe kumamukeli bese silawula ijubane le-rotors ngalinye noma ama-motors kagesi ahlobene. Futhi ama-gyroscopes angasetshenziswa ukuzinzisa isilawuli sejubane Quadrocopter ukushayela.
Ngenxa yokusebenza kahle kuyoba khona quadrocopters ngokuvamile Ama-motors e-Brushless isetshenziswe. Zifinyelela ngesivinini esiphezulu kakhulu futhi zithinta ukugqoka uma kuqhathaniswa nama-brush. Izinjini zangaphakathi zomlilo ngokuvamile zisetshenziselwa abakhiqizi bemodeli bezobuchwepheshe ezinamamodeli amakhulu. Uma kuqhathaniswa nama-motors kagesi, aphakama, adala igesi lokukhipha futhi adinga ingxube yephethiloli engabekayo futhi enobuthi.
Amandla adingekayo Quadrocopter ukunikezela Ama-accumcumators (ibhethri elayishiwe), Kuzo isitoreji samandla ashona, Inzuzo enkulu iqhathaniswa namabhethri, akudingeki ukuba ivuselelwe ngokushesha uma ingenalutho. Amabhethri nawo asetshenziselwa ukusebenzisana nemilayezo yasilawuli kude ekunciphiseni izindleko lapho. Noma kunjalo, ibhethri evuselela futhi ishaja iyadingeka, okuvame ukuthi ifakwe kakade kumaqoqo.
Izinhlobo ezahlukene ze-quadrocopters
Ngokuya ngobukhulu, imishini nokusetshenziswa okuhlosiwe, kunezinhlobo ezahlukene nezindlela zokuhweba Quadrocopter iyatholakala. Khetha imodeli ekahle kuwe. Siyajabula ukukusiza!
I-quadrocopter (i-quadrocopter encane) yokusetshenziswa kwangaphakathi
Kufana nomncane ezinophephela emhlane mini kukhona futhi mini Quadrocopter, Ziyakwazi ngokukhethekile ukushayela emakamelweni avulekile, amahholo noma ngisho nasemakhazeni, ngisho nokusetshenziswa ngaphandle. Zincane kakhulu futhi zilula. Isisindo esincane asibeki inselelo enkulu kuma-engines, yingakho encane kakhulu futhi izinjini zokulondoloza amandla ingatholakala. Kodwa basengozini kakhulu emoyeni futhi abakwazi ukulawulwa-noma kuphela kabi kakhulu. Intengo yabo ephansi nokuphathwa kwabo kulula mini Quadrocopter ekahle ezinganeni, abaqalayo noma abaqalayo. Ngenxa yesisindo sayo esincane, umonakalo kumodeli kanye nempahla lapho kwenzeka ukuwa kukhulu kakhulu. Ngokwezindleko, ziphakathi kwe-20 ne-70 Euro, njenge- I-Archer Skytech iM62 Mini Quadcopter.
I-Archer Skytech I-M62 Mini Quadcopter 4CH 6 I-Axis Gyro I-Drone 2.4GHz I-Remote Control Indicator
Umklamo ophelele futhi olula. With izibani LED kungenzeka ukuba fly ebusuku.
Uhlelo lwe-6 Axis luvumela ukuthi i-quad iqalwe ngesandla.
Ukuzinza: I-6-Axis Gyro Quad-Rotorcraft Flight, ukuzinza okuqinile, kulula ukuqalisa ukunyakaza kwezindiza ezahlukene Ukuphikiswa Kwomoya Okuqinile, kulula ukulawula.
Ubuchwepheshe be-2.4 obuvunyelwe ukulwa nokuphazamiseka. Ngisho nama-quadcopter amaningi angahamba ngesikhathi esifanayo ngaphandle kokuphazamisana.
Ibhethri ephezulu engenakwenzeka, ungakwazi ukujabulela injabulo enkulu yendiza.
I-quadrocopter yokusetshenziswa kwangaphandle
Isisindo esiphakeme kanye nezinjini ezinamandla zifakiwe quadrocopters iyatholakala ngendiza ngaphandle. Unokucacile isimo sengqondo esithambile futhi ayikwazi ukuphazamiseka kalula ngomoya, lapho ukuqhuma okunamandla kuqondwa kahle nalezi zindlela. Kukhona ngalolu hlobo Quadrocopter futhi namanje amamodeli angenayo amazinga angenayo, lapho intengo enobukhulu kanye nemishini (isibonelo, isimiso sekhamera) singasheshe senyuke ema-euro ayizinkulungwane eziningana zokuqhubela phambili zokuzilibazisa. Njengamanye amamodeli alawulwa kude, ifika nakububanzi bokudiliva. Iningi Quadrocopter iphelele Isetha (RTF "ilungele ukuhamba") ithunyelwe nazo zonke izingxenye ezidingekayo. Izinhlelo ezihlanganisiwe zekhamera zivame ukukhetha ikhwalithi yesithombe noma isinqumo. Ezinye izinhlobo zinikeza eyodwa HD nesinqumo, nezinye izidingon ikhwalithi ye-4K. I izinhlelo ikhamera, kukhona umehluko ukuthi izithombe adluliswa ngesikhathi sangempela, isibonelo, umbukiso noma izibuko FPV, noma kwimemori khadi ukuze iyohlolwa kamuva yezithombe zigcinwa. ngumuntu Ukudluliswa kwesikhathi sangempela kwezithombe ukulawula imodeli ngokusekelwe kolwazi lomfanekiso olutholakali olwenzekayo, lulawulwa ngokucophelela njengokungathi umshayeli wendiza uhlale kule Quadrocopter, Igama lingenxa yalo FPV ukuthi yini "Umuntu wokuqala ubheke" imele. Ngokuphathelene ne-FPV futhi uhlelo lwe-GPS lusetshenziswa kakhulu. Lokhu kuvumela imisebenzi eminye. Ngu uhlelo GPS, ebuye isetshenziselwe izinhlelo zokuhamba, kungaba khona Quadrocopter idatha ye-orient noma yokuhamba ingadluliselwa. Ngalesi telemetry, isibonelo, isikhundla noma ukuphakama kwamanje kungafundwa. Amanye amamodeli angabuye abuyele ngokuzenzekelayo uma eshiya ibanga lokudlulisa, okwandisa ukuphepha okukhulu, ikakhulukazi uma amabanga amade ahamba nawo Quadrocopter ukumbozwa. Esinye isici esinikezwa ezinye zezinhlobo ngenxa yesistimu ye-GPS. Lapha isignali yokudlulisa ilandelwa ngokuzenzakalelayo. Isibonelo, uma "umshayeli" ehamba ngezinyawo Quadrocopter ukuqopha.
Ngokuqinisekile uzoba nomunye I-Drone ngekhamera akunakwenzeka ukuthi ujabule kakhulu. Ukukwazi ukubuka imvelo kusukela ekubukeni kwenyoni-akuyona nje injabulo kubathandi bemvelo. Okuningi okunye okufihlekile kungabonwa kusuka phezulu. With popular I-quadrocopter ye-FPV (ukubuka komuntu wokuqala) lokho kungenzeka kalula. Inzuzo yinto elula yokusebenza, lokhu ngokuyinhloko kunjalo ngamamodeli okusetshenziswa ngaphandle nangaphakathi.
Quadrocopter ingasetshenziselwa izinhloso zokuhweba. Isibonelo, ungabasebenzisa ukuqapha impahla yakho, thola umonakalo ezakhiweni futhi ugcine iso lokuthengisa. Ukuze kube nokuqapha nokulawula, amamodeli aphakeme kakhulu abonakala abe usizo oluhle. Ungakhohlwa isimo sezomthetho, ngoba ukuvikelwa kwedatha nokuphepha kwezindiza kuhlale kusenesikhathi lapho usebenzisa i-drone.
Amamodeli ngekhamera asekela amadivaysi okukhipha ahlukene wesithombe sesithombe. Ngakho-ke, ukuboniswa kokulawula okukude, izibuko zokubonisa noma ngisho nokuxhumana kokubonisa kunganikezwa.
Amamodeli wezinga lokungena
Ingabe usengakwazi ulwazi olulodwa lwezindiza Quadrocopter, iphakamisa imodeli eshibhile yamahora wokuqala okuhamba, ikakhulukazi uma izingane zifuna ukuyisebenzisa. Amamodeli angenakuqhathaniswa namancane amancane angathembisa okuningi kumnandi kuwo wonke umuntu. Izinkinga ze Entry level onobuhle ezinye zilahlekile izici ezikhethekile, izikhathi ezinqamule zendiza nokuntuleka kwemishini yekhamera, kodwa futhi zihlinzekela ngaphandle ngenjabulo enkulu yokuzilibazisa. Kulula kakhulu ukweqa futhi intengo ishibhile. Kakade mayelana ne-90, - i-Euro uzothola ukusebenza kahle kakhulu ukuze uqalise Quadrocopter ngaphambili.
Nquma ngaphambi kokuthenga uma kudingwa imodeli ehlanzekile yangaphakathi. Ngaphandle, ukuzola okuphelele kuyadingeka ngendiza.
Ukuthenga ku-Intanethi noma kumthengisi wendawo?
Kuhle ngaphambi kokuthenga eyodwa I-quadrocopters kuyi-Intanethi ukwazisa. Lapha uzothola ukhetho olukhulu lwemikhiqizo kuhlanganise Ulwazi. Isinqumo lapho ungathenga khona imodeli oyifunayo kufanele ubuyekeze kahle kahle, ngoba amanani lapha abonisa umehluko omkhulu phakathi kwabadayisi be-inthanethi nabathengisi bendawo. Sithemba ukukusiza ngolwazi lwethu.
Esizeni: amamodeli avela kwezohwebo ochwepheshe
Izitolo zokwenza izibonelo azitholakali endaweni yakho, ngakho-ke uhambo olude luzodingeka. Yiqiniso lokhu kuhlotshaniswa nezindleko ezengeziwe kanye nesikhathi. Okudabukisa ngokukhethekile, uma kungenjalo ngisho nokupaka kuyatholakala eduze. Kubathengi abathile, lokhu, akunandaba ngoba bayakwazisa iseluleko sobuchwepheshe - ukubonisana komuntu siqu. Ngeshwa, lezi zindlela zokubonisana azihlali zihlale zihle kumakhasimende, njengoba abanye abathengisi bezama ukuthengisa ama-drones esitokisi, okuyiwona ongeke abe ngumqashi wokuhlola njalo. Iningi lomgcini wesitolo limelelwa njengesibonelo esiphezulu. Izindwangu zilukhuni ukuthola ezitolo ezikhethekile. Amamodeli anikezwa yizinkulumo, ngokuvamile nje kuphela isikhathi esifushane sokumnandi.
E-intanethi: Thenga kusuka kumthengisi we-intanethi
Thenga owakho Quadrocopter kwi-intanethi, ungathenga ngaphandle kwemingcele. Emini ngehora Amasango avulekele kuleli zwe lokuthenga, ngisho nsuku zonke. Ngokuqinisekile uzothola amanani ashibhile nokukhethwa okukhulu kwamamodeli ahlukene. Izikhombisi-ndlela, ukucindezeleka nezindleko ezengeziwe zigcinwa uma uthenga ku-inthanethi. Yiqiniso akunakwenzeka ukusebenzisa i-drone ngokushesha, kodwa Izikhathi zokuthumela eziphansi futhi kufanelekile ukulinda. Ukubonisana komuntu siqu akukwenzi, kodwa lokhu akuyona into esemqoka futhi ikhasimende elinomusa. Ngesinye Ukuhoxiswa Akudingeki ukwenze ngaphandle kokuthenga ku-intanethi.
Izinzuzo ze-quadrocopters ezikhungweni ezilawulwa kude nezindiza zezindiza
a Quadrocopter ivuselela amandla ayo ngokusebenzisa ama-propellers (rotors). Uma kuqhathaniswa nezindiza, ezikhiqiza ukuphakama kuphela ekuhambeni kwegeyimu emaphikweni, a Quadrocopter ukukhuphuka kanye nomhlaba ujikeleze, futhi ume emoyeni. Ngakho ayikho isivinini esincane okufanele sihlonishwe futhi akukho mgwaqo odingekayo. Yingakho amanye amamodeli angasetshenziswa ngisho nasendlini. Futhi ama-shoot shots azuza ngamakhono we- Quadrocopter.
I-helicopter elawulwa kude ikuza izimpawu zezindiza a Quadrocopter eduze kakhulu. Nokho, i-helicopter isebenza kwezinye izisekelo, okuyinto enzima ukuyilawula. Une-rotors eyodwa kuphela eyodwa, ekulu kunayo quadrocopters kukhona. Ukuze uqhubekele izinyathelo ezihlukahlukene zomoya, i-helicopter idinga izingxenye zemishini, isibonelo i-swashplate noma ama-rotor blade adjustable. Akuyona nje isakhiwo esiyinkimbinkimbi kodwa futhi nokusebenza. Ngaphezu kwalokho, i-rotors yama-helicopter inkulu kakhulu kunaleyo Quadrocopter, Ngaphezu kwalokho, kunakekelwa ukuthi izintambo ze-rotor azikho ndawo. Ngisho ne-angle eyinqaba ekuqaleni kwe-helicopter kungaholela emthethweni wezintambo ze-rotor emhlabathini, okuvame ukulingana nokubhujiswa komfanekiso. a Quadrocopter inezinguquko ezine ezincane, ezingahle zihlanganiswe "nezinqolobane zokuzivikela". Ngenxa yalokho, ama-rotor blades angakwazi ukushaya ndawo noma kuphi. Izinyathelo zezindiza zivela ku quadrocopters kuphela ngesivinini esihlukene semishini ngayinye. Lokhu kwenza ukuklama kwabo kube lula futhi ukusebenza kulula. Akuvamile ukubamba ngisho nokuqhuma "abaqhubi bezindiza" i-helicopter elawulwa kude once with quadrocopters on.
Quadrocopter kungenziwa ukhiqizwa ngokungabizi kahle futhi akudingi ukuthi kudinga indawo enkulu yendiza. Ngenxa yalokho, basesimweni sokudumile kwamamodeli alawulwa kude. Ngenxa yalokho, kunezinombolo ezikhulayo drones emoyeni. Ummeli wezombusazwe ubona ingozi kwinani elikhulayo lemicibisholo engenakunqunywa, yingakho imithetho yokudakwa yenziwa. Lezi zixhomeke ezintweni zokuhamba futhi zihanjiswe ngokufanele. Ingcaphuno encane kuyo:
Kusukela kwisisindo sokususa esingaphansi kwegremu le-250, kuhlale kunikezwa ukubhaliswa okudingekayo, ngisho nakwizindiza zezindiza ezimodeli! Ehlala njalo futhi engabonakaliyo kanye nokungabi namlilo, kumele kube uphawu lwegama nekheli lomsebenzisi we-drone noma Quadrocopter ukuba yenziwe. Kusukela kwisisindo sokususa okungaphezu kuka-2 kg, ngaphezu kokumakisha okugunyazayo, kudingeka isitifiketi sezindiza, okumele siphindwe njalo eminyakeni yonke ye-5. Ngokuyisisekelo, ama-drones akufanele ahambe aphakeme kunamamitha angu-100. Ngezindawo eziphezulu, kufanele kutholakale ukuxoshwa ku-Aviation Authority. Kubalulekile ukuba uhlale kude nezindawo ezingekho-fly, isibonelo eduze nezindawo zezindiza, izinqolobane zemvelo, izixuku zabantu noma imigwaqo emikhulu. Ukuhamba ngezinyawo kwamanye amazwe kudinga imvume yomnikazi. Ngamamodeli namakhamera, izici ezengeziwe zingase zibalulekile. Njengoba nje abantu abangabazi bengabanjwanga noma yikuphi ngaphandle kwemvume yabo, ilungelo lokuyimfihlo ngokwemvelo liphinde lisebenzise nasekusebenziseni i-drones yekhamera.
Ngakho-ke kuyadingeka ukwazi noma ukuhlola isimo sangempela nesifundazwe ngaphambi kokusebenzisa eyodwa Quadrocopter igeleza. Ngaphezu kwalokho, imithethonqubo iyaqhubeka ikhuliswa, okumele ukwaziswa njengomnikazi nomsebenzisi.
I-SNAPTAIN A15H Drone ene-Camera HD 720P Foldable Drone FPV WLAN 120 ° Wide Angle RC Quadcopter / Modeless / Mode Altitude / 3D Flips / Tragencyory Flight / Voice Voice / Gravitational Sensor / Gravitational Sensor
Dr 【I-Drone Foldable ye-3D】 Le drone A15 iyasebenza futhi ikhululekile ukuyisebenzisa ngezingalo ezisongelayo. Ngomklamo osongelayo: 13 * 13.5 * 6 cm, icompact, ilula futhi ishibhile, ingcono kakhulu ukuhamba futhi ingahanjiswa ekampini.
Ikhamera ye-【【720P HD kanye ne-FPV yokudluliswa kwesithombe】 I-A15 drone ifakwe ngekhamera engu-120 ° ububanzi obungu-720P HD futhi ungaguqula ilensi yale drone ngesandla (ungaguqula ilensi yale drone ngesandla (phezulu noma phansi) , Ukurekhoda amavidiyo asezingeni eliphakeme nezithombe ze-air.
I-Flugzeit 【Isikhathi eside sendiza futhi kumnandi ukundiza】 I-SNAPTAIN A15 drone ihlinzekwa ngamabhethri amabili we-800 mAh. Isikhathi sendiza sebhethri ngalinye le-drone lingafinyelela imizuzu eyi-7,5, okwenza indiza yakho ijabulise futhi yandise isikhathi eside
✈ 【I-Trajectory kanye nokulawulwa kwezwi】 Ubuchwepheshe bamuva: Uma udweba umgwaqo ocindezelayo esikrinini sefoni yakho ephathekayo, i-drone iz ukundiza ngokuzenzakalela ngokuya ngomzila. Lawula i-drone yakho engenamiyalo ngemiyalo elula yezwi ngesiNgisi efana ne- "khumula", "kokwehla", "kwesobunxele", "kwesokudla", "phambili", "emuva".
I-Kundenservice service Isevisi yamakhasimende ehamba phambili】 Le drone inemisebenzi eminingi futhi kulula ukuyisebenzisa, ilungele abaqalayo nezingane. Uma unemibuzo, sicela uxhumane nathi futhi sijabule njalo ukusiza.
I-Carrera RC Quadrocopter X1 370503013X isibonisi se-Quadrocopter esilawulwa kude esisekude
I-QUADROCOPTER X1 - i-quadrocopter elawulwa kude
Ubuchwepheshe be-2,4GHz bezimoto ezifika ku-16 ngasikhathi sinye
Isikhathi esijwayelekile sokusebenza kuze kube yimizuzu engu-7, isikhathi esisheshayo sokushaja imizuzu engama-60
Ukulawulwa kokulingana kwe-digital, i-quadrocopter - ikhwalithi ephezulu ye-4-axis GYRO-SYSTEM, yokuziphatha okuzinzile, okulula
I-AUTOMATIC Flight Height ASSIST ene-AUTO Start & LUNING FUNCTION, INDLELA YOKUHLAKANIPHA KWESIQINISO, ISIQINISEKISO ESIPHELELEYO SOKUGCINA, UKUTHOLA ISANGENISO lapho kunenkinobho, ilungele iziqalo kanye nokubonga okuthuthukile kokuthi I-BEGINNER / IMODI YOKUGCINA, IPHAKAMISA IMITHETHO ye-3D IKHASI LOKUVIKELA
I-SNAPTAIN SP300 drone ene-LED eluhlaza okwesibhakabhaka, i-quadrocopter eyi-RC enokulawulwa okukude okungu-3, ​​amabhethri ama-2 imizuzu eyi-14, i-Throw'N Go, umsebenzi we-dodge othomathikhi, ithoyizi yedroni labaqalayo nezingane
IZIQINISEKISO ZESITHUTHA ZESITHATHU ZOKUGULA, ISIVIVINYO SOKUTHENGA - I-SNAPTAIN SP300, i-mini Drone iza nezilawuli ezikude ezintathu - isilawuli se-mini mini eyi-remote control, i-G-sensor yewashi yokulawula okukude nokulawulwa okukude ngendlela yokwehla kwamanzi. Izilawuli ezintathu ezikude ziqinisekisa injabulo kathathu. I-SNAPTAIN ilwazisa ulwazi lwakho, funda imiyalo ngokucophelela ngaphambi kokuyisebenzisa, njengoba izilawuli kude ezikude zihambelana nemisebenzi ehlukile.
S UHLELO LOKUTHOLAKALA OLUFINYELEKILE - Izinhlobo ezimbili zezinhlelo zokuthola ubuchwepheshe be-SP300 drones. Uhlelo lokutholwa kwe-infrared olunezinzwa ezintathu ze-infrared (ngaphambili / emuva / phansi) kukuguqula umshayeli ongenazandla. Mane nje ulawule i-SNAPTAIN SP300 RC Quadcopter entendeni yesandla sakho. Uhlelo lwenzwa ye-infrared enezinzwa ezine ze-infrared (ngaphambili / emuva / kwesokunxele / kwesobunxele) kufezekisa ukutholwa kwesithiyo se-omnidirectional futhi iqinisekise ukundiza okungahambi kahle.
🚀 UKUVIKELA OKUGCWELELELE KAKHULU KWESI-ILight - Icala lokuvikela elinamacala amane lifakwe izibani zobusuku ezikhanyayo eziluhlaza okwesibhakabhaka, ukuze ujabulele umphumela wokukhanyisa ebusuku onamandla kanye nesipiliyoni sokundiza esijabulisayo sasebusuku. Indandatho enkulu yokuvikela, evikela abaxhasi ekushayweni, iqinisekisa ukundiza okuphephile kwe-SNAPTAIN drone.
🚀 STOL COOLER - ukuphonsa imnene ukuqala. I-SP300 nge-self-ndiza. Shiya imodi yokujikeleza neye-infrared ivuliwe. Ukulawulwa kokukude kwe-G-sensor - indlela ekhethekile yokulawula yenza i-SP300 ibe yi-RC drone esebenza kahle ebambe ngesandla. Vele ugqoke iwashi futhi i-drone izondiza njengoba ufisa. Ndiza ohlangothini olunikezwe ngesandla sakho futhi wenze ngisho nama-3D flips aphelele.
🚀 IDOLOBHA KAKHULU NGEMISEBENZI EYODWA - Imodi engenamakhanda namazinga amathathu wejubane anikezela ngezinketho zendiza eziningi. Ukucindezela inkinobho eyodwa - inkinobho eyodwa yokuthatha / yokufika kanye nenkinobho yokubuya eyodwa kwenza kube lula kubo bonke amaflaya, kungaba ngezingane, iziqalo noma abasebenzisi abanolwazi. Inketho ekahle yokuzalwa, amaholide kanye nezipho zikaKhisimusi zokuzijabulisa okuningi nabangane nomndeni.
I-Holy Stone Mini Drone HS170 RC Quadcopter 2.4GHz 6 Axis Gyro Helicopter ilawulwa ukude ngokulawulwa okukude, inkomba eluhlaza okwesibhakabhaka
Uhlelo lwe-6-Axis Gyro 2.4G Hz lokuqina, ukhetho oluhle kakhulu lokuqeqeshwa kwe-drone
Izinhlobo ezintathu zejubane zihlangabezana nezidingo ezihlukile kusuka ekuqaleni kuya kuchwepheshe
Ibanga: Amamitha angu-30-50. Isikhathi sokuqalisa: 6-8 Min Isikhathi sokulayisha: 60-80 Min. <0.5A-1A)
Isistimu yemodi engenamakhanda: ngokusebenzisa isilawuli kude ikwenza kube lula ukulawula, ukulawula okulula, kumnandi
Insiza Yekhasimende Ehamba Phambili: Uma unezinkinga noma imibuzo ngenkathi undiza, sicela uxhumane nathi. Sizokunikeza insiza yamakhasimende ehamba phambili
I-DJI Mavic Mini Fly Ngaphezulu kwe-Combo (i-EU) - i-drone ne-accessory kit, ukukhanya nokuphathekayo, isikhathi sendiza: i-30 min, ibanga lokudlulisela: 2 km HD video transmit, 3-axis gimbal, 12 MP, HD video 2,7 K show
EZIPHUMA: I-DJI Mavic Mini ephathekayo nenomshini wesikhathi sendiza enamaminithi angama-30 inesisindo sama-gramu angama-249, okuyenza ibe ngesigaba esiphansi nesiphephe kunazo zonke phakathi kwama-drones
I-GIMBAL CAMERA: I-Mavic Mini iyakwazi ukuthatha izithombe ngama-megapixels angama-12 namavidiyo ku-2,7K QHD. I-gimbal igxilile kuma-axes amathathu futhi inikezela ngokudutshulwa kwe-butter-soft
UKULUNGA KWESIKHUMBUZO: Isilawuli kude sikunikeza ukudluliswa kwevidiyo ku-HD nge-latency ephansi, enobubanzi obufika kumakhilomitha angama-4. Izinti zokulawula ezisuswayo zenza kube lula ukuthutha
I-FLY APP: Ngohlelo lokusebenza lwe-DJI Fly ungakha ukuqoshwa kwamafilimu ngokuchofoza nje okumbalwa. Uhlelo lokusebenza lunikeza tutorials eziwusizo ezenza kube lula, kusheshe futhi kuphephe ukuqalisa ezweni lokubaleka
OKUQUKETHWE: Ukuvikelwa kwekhamera, ibhethri lendiza eli-3x elinobuhlakani, isilawuli kude sokusakaza, 3x i-wireless capel, ikhebula le-2x le-USB elincane, intambo yokulawula kude yomsakazo (isixhumi se-USB USB, i-USB-C, isibani)
IPotensic GPS FPV Drone enekhamera ye-1080P HD, i-RC Quadcopter, i-Dual GPS kanye ne-Me Me Mection, Ukuhanjiswa bukhoma nge-120 ° Wide Angle, Bamba phezulu, Imodi engenamakhanda, Kuhle kwabakwa-Ancestors kanye ne-T25 yabantwana
Ikhamera ye-【【1080P HD ye-Wi-Fi】: I-120 ° FOV kanye ne-75 ° ekwazi ukuguqulwa, ithwebula amavidiyo we-HQ nezithombe zasemoyeni. Ikhamera ye-1080P HD ithwebula ukuhanjiswa kwesithombe ngesivinini esikhulu ngaphandle kokulibala. Kuqopha zonke izinkumbulo zakho ngenkathi uzijabulisa ngesikhathi sangempela.
🎥 【I-GPS e-Dual yendiza ephephile】: Ngohlelo lwe-GPS ungathola imininingwane eqondile yesikhundla se-Drone yakho. I-Drone izobuyela ekhaya ngokuzenzakalelayo lapho ibhethri liphansi noma isinali libuthakathaka ngenkathi indiza.
【【Imodi yokulandela-】: Kumodi ye-GPS nalapho elawula i-smartphone, ingakwazi ukulandelela ngokuzenzakalela isikhundla sefoni yakho futhi ibambe umzuzwana ngamunye lapho uhamba, ugijima futhi uhamba.
🎥 【Kulula ukuyisebenzisa】: Imodi engenamakhanda, bamba ukuphakama nenkinobho yokususa / yokufika ukuze usebenze kalula. Ungakhathazeki ngokuqondisa. Ngokucindezela okulula kwenkinobho, i-drone yakho iyakhuphuka noma iwele, ilungele abaqalayo.
🎥 【Ibanga lokulawula elengeziwe nemodi ye-VR】: Ibanga lokulawula kude lide lifike kuma-300 m, ukuze ujabulele ukubuka komhlaba omkhulu nokuzwa kwendiza okuhle. Bona indawo eyihlane enezibuko ze-VR (azifakiwe) futhi ujabulele isipiliyoni se-FPV.
I-Tomzon D15 esebenza kancane ngesandla i-mini Drone enamabhethri ama-2, i-UFO yokungeniswa engaphakathi, ukungqubuzana kwe-RC quadrocopter, ukuphakama kokubamba, iflip ye-360 °, inkinobho eyodwa yokuphakamisa / ukufika kwe-helikopta yokudonsa yezingane ukubonisa
I-UFO drone, ukusebenza okulula: inkinobho eyodwa kuphela yokulawula i-D15 phezulu naphansi. Futhi uma usizungeza, i-drone ihamba iye ngakolunye uhlangothi. Kungenza futhi ukujika okungu-360 ° emoyeni.
Ukundiza okuphephile ngaphakathi nangaphandle: Le mini yedrone eyenziwe ngezinto ezingenabo ubuthi ze-ABS iyaguquguquka, ilula futhi ibe ne-shockproof. Ayilimazi ingane yakho futhi ayonakaliswa ukushayisana.
Ukuvimbela Isithiyo: I-D15 ifakwe ngokuphelele ngezinzwa ze-infrared. Uma ushaya udonga, ifenisha noma ezinye izithiyo phambi kwe-drone, ungakugwema ngokuzenzakalelayo.
Isipho esifanele izingane: ithoyizi le-mini Drone ezindizayo zabafana namantombazane liyisipho esifanele sikaKhisimusi, usuku lwezingane, usuku lokuzalwa neminye imigubho. Ingane yakho noma umngani wakho uzoyithanda le-drone esebenza ngesandla.
Izinsizakalo Zokuthengisa: Ithimba lenkonzo yamakhasimende eliqeqeshiwe likunikeza impendulo esheshayo nomsebenzi wamakhasimende onobungane.
EACHINE E511S GPS Drone ngekhamera 1080P HD WiFi FPV ukusakaza bukhoma, RC Quadrocopter, landela-kimi mode, 3D flip, trajectory indiza Faltdrohne Wabasaqalayo, New Release (Black) Khombisa
Ukulethwa cishe izinsuku ezingama-35. Imodi yokubeka i-PSGPS: Ngohlelo lwe-GPS yokumisa, akusadingeki ukhathazeke ngokulahlekelwa i-drone, noma ngabe isinali yokulahlekelwa yi-drone noma amandla aphansi. Izindiza ibuyele ngokuzenzakalelayo futhi i-drone ayisoze yalahleka. Ungaphinda ucindezele ukhiye ongemuva wenkinobho ukhiye. I-Drone indiza ibuyela endaweni yokuqala
Ikhamera ye-💘1080P 120 ° FOV 45 ° eguqukayo ye-HD: Ikhamera ye-1080P 120 ° FOV 45 ° eguqukayo ye-HD inika amandla ekhwalithi ephezulu yevidiyo kanye nezithombe zasemoyeni. Ukudluliswa kwesithombe okusheshayo ngaphandle kokubambezeleka kwesikhathi, isithombe ngasinye ngamaphikseli angu-1920 * 1080, ama-angle angaba ngu-120 ° obanzi anwebekayo angashintshwa angama-45 ° kukusiza ubone umhlaba ngezindlela eziningi zokubamba njalo ngomzuzu omuhle onikeza okuhlangenwe nakho okuhle kakhulu.
Imodi ye-OllFollow-me & mode ye-orbit / indlela yendlela: kumodi yokulandela mina, i-drone ngokuzenzakalelayo ilandela yonke ukunyakaza. i-drone ekahle ye-selfies futhi ithathe izithombe noma amavidiyo ngentando. Kwimodi yokujikeleza, i-drone indiza ezungeze idivaysi ephathekayo, ungasebenzisa i-self-timer ngama-engeli amaningi. Kwindlela yokubonisa ungadweba indlela, i-drone iz ukundiza ngokuya ngomdwebo wakho.
💓Ibhethri elinamandla kanye nendiza ezinzile: Jabulela isikhathi sendiza esiphezulu semizuzu engu-16. Jabulela ubumnandi obuningi ngasikhathi sinye nebhethri elinamandla lihlala isikhathi eside. Umsebenzi we-Altitude Hold uqinisekisa i-hover ngisho nasekuphakameni okuthile. Lesi sici senza izithombe namavidiyo asemoyeni amahle kakhulu.
👨‍💻Uma unezinkinga ngomkhiqizo, ungaxhumana nensizakalo yamakhasimende yomthengisi noma ikheli le-imeyili elisemthethweni (i-Amazon@eachine.com), umgqugquzeli ngeke ajike, okusho ukuthi ibhokisi le-gear gear kufanele lishintshwe. ❤Happy 2020 ~! ❤
I-Potensic FPV RC Mini drone enekhamera ye-HD, amabhethri ama-2, i-quadrocopter 2.4G 6-axis yesilawuli kude esikude, indawo ephakeme, imodi engenamakhanda, imodi yejubane, ukukhipha / ukubuyisa okhiye, ibhethri elikhiphekayo i-A30W - inkomba eluhlaza okwesibhakabhaka
✈ 【Ukulawulwa kwe-APP nemodi yokudonsela phansi】: Sebenzisa i-drone yakho nge-APP ngemuva kokuthi uxhume i-WiFi kwifoni yakho (i-iOS noma i-Android). Ungasebenzisa imodi yokuhambisa amandla adonsela phansi ukuze undize i-Drone yakho phambili / emuva, ngakwesobunxele / ngakwesokudla nangapha indlela oqonde ngayo ngocingo lwakho.
Ikhamera ye-✈ 【HD FPV】: Lokhu kukuvumela ukuthi urekhode amavidiyo we-FPV asezingeni eliphakeme nezithombe ngesikhathi sendiza.
✈ 【Imodi yokuhamba ngendiza yangokwezifiso & Imodi engenamakhanda】: Dweba uhlelo lwakho lendiza esikrinini bese i-drone indiza emzileni obekiwe. Uma imodi engenamakhanda icushiwe, umshayeli wendiza angakwazi ukundiza i-drone kunoma iyiphi indawo, kungakhathalekile ukuthi i-drone ikhomba yiphi.
Start 【Inkinobho eyodwa yokuqala / kokwehla】: I-quadrocopter inyukela ekuphakameni okungaguquki kanye namafosholo noma emhlabathini ngobumnene phansi phansi ngokucindezela kwenkinobho. Vumela abadlali bawo wonke amabanga ukundiza kalula i-drone ngokulawula okuphelele kanye nokusebenza okuhle kakhulu.
Battery 【Ibhethri elingena esikhundleni kabusha】: I-Drone ingasekela izikhathi zendiza ezinde zakho nomndeni wakho ngokubuyisela ibhethri.
I-Potensic Mini Drone A30 enamabhethri ama-2, i-RC Quadrocopter 2.4G 6-axis yesilawuli kude esikude, ukuphakama, imodi engenamakhanda, imodi yejubane, ukuqala okhiye / ukubhuka okumnyama
Flight Isikhathi sokundiza esiyimizuzu engu-16: I-mini drone ifakwe amabhethri amabili ayisuswayo futhi angaphinde akwazi ukwenziwa. Ungandiza ufike kumizuzu engu-2 amabhethri AMABILI afakiwe. Ukuqinisekisa ukuphepha kanye nobumnandi obuningi, i-Potensic quadrocopter yayingaphandle kokulawulwa.
Kulula ukufunda: I-drone iyasusa / isiza ngokuthepha nje okukodwa. Ifakwe futhi i-Altitude Hold, iMode engenamakhanda nezindlela zesivinini ezi-3 ezinhle kakhulu kubaqalayo, ama-newbies ngisho nezingane.
Imodi engenamakhanda: Kwindlela engenamakhanda, i-drone indiza iqonde lapho kukhombe khona induku yokudlala efanele. Ungandiza i-drone ngaphandle kokukhathazeka ukuthi ikhomba yiphi indlela, ikakhulukazi uma kukude.
Iyatholakala futhi iphephile: I-Drone incane futhi ingathathwa noma kuphi, isb. B. lapho usohambweni, emaphathini, emicimbini yezemidlalo nakwezokuvakasha. Amafreyimu amane wokuvikela ukuvikela kumonakalo, sinikeza isiqinisekiso sezinyanga eziyi-12.
Izindlela zejubane le-✈3: inselelo yamazinga ahlukene obunzima ngejubane elihlukile, elungele bonke abantu (abadala noma izingane, iziqalo noma eziphambili)
Isihloko sangaphambiliniayina esiteshini
Isihloko esilandelayoIzindiza ezilawulwa kude